Ugboro abụọ ojii
Ofu clamping nlereanya
ọgwụ na ebu
Gbaa mbọ hụ na nchekwa nke ngwaahịa na ọrụ
Post oge: Feb-28-2020
Ebe ọ bụ na ọhụrụ coronavirus dajụọ na China, ruo ọchịchị ngalaba, ala ndị nkịtị, anyị na-Kingswel Machinery n'ógbè niile na-ejegharị nke ndụ, ihe niile na-etoju nke nkeji na-ifịk ifịk na-ewere ihe ime a ezigbo ọrụ nke ọrịa igbochi na ịchịkwa ọrụ. Ọ bụ ezie na anyị factory adịghị na ...Gụọ ọzọ »
Lee ị na 2017 Chinaplas na Guangzhou
Post oge: Apr-26-2017
Ezigbo Ahịa, Kingswel dị njikere-akụkụ na 31th Chinaplas 2017 na Guangzhou.The mma bụ site 16 ka 19 nke May. Anyị ụlọ ndò nọmba bụ S01, Ụlọ Nzukọ 11,1. Daalụ niile maka nkwado na ntị maka Kingswel na anyị nwere ike na-eche na ịhụ gị na Chinaplas. Best Banyekwara, Eric Xu Gụọ ọzọ »
The 2016 Chinaplas Booth Number maka Kingswel Machinery
Post oge: Feb-22-2016
Ezigbo ahịa na enyi, Kingswel Machinery na-aga na-akụkụ ke 2016 Chinaplas mma na Shanghai. Ụlọ ndò nọmba ọmụma bụ n'okpuru. Daalụ niile maka enyemaka, na ntụkwasị obi na Kingswel Machinery maka ọtụtụ afọ. Anyị nwere ike na-eche na ịhụ gị na 2016 Chinaplas na Shanghai. Na nke a f ... Gụọ ọzọ »
Kingswel dị njikere-akụkụ na 2015 Chinaplas
Post oge: Apr-27-2015
Kingswel na-aga na-akụkụ ke 2015 Chinaplas na Guangzhou. The ngosi oge bụ site May 20 na May 23. Anyị ụlọ ndò nọmba bụ 11.1 S65. -Atụ anya ịhụ anyị ochie na ndị ọhụrụ ahịa e! Gụọ ọzọ »
Ekwentị: (++ 86) 13901569990
Ekwentị: (++ 86) 13962250904
Gbaa mbọ hụ na nchekwa nke ngwaahịa na emp ...
Ebe ọ bụ na ọhụrụ coronavirus dajụọ na China, ruo ọchịchị ngalaba, ala ndị nkịtị, anyị na-Kingswel Machinery n'ógbè niile na-ejegharị nke ndụ, ihe niile na-etoju nke nkeji na-ifịk ifịk na-ewere ihe ime a ọma j ...
Ezigbo Ahịa, Kingswel dị njikere-akụkụ na 31th Chinaplas 2017 na Guangzhou.The mma bụ site 16 ka 19 nke May. Anyị ụlọ ndò nọmba bụ S01, Ụlọ Nzukọ 11,1. Daalụ niile maka nkwado na ntị maka Kingswe ...
The 2016 Chinaplas Booth Number maka Eze ...
Ezigbo ahịa na enyi, Kingswel Machinery na-aga na-akụkụ ke 2016 Chinaplas mma na Shanghai. Ụlọ ndò nọmba ọmụma bụ n'okpuru. Daalụ niile maka enyemaka, na ntụkwasị obi na Kingswel Machinery n'ihi na otú mmadụ ...
Kingswel dị njikere-akụkụ na 201 ...
Kingswel na-aga na-akụkụ ke 2015 Chinaplas na Guangzhou. The ngosi oge bụ site May 20 na May 23. Anyị ụlọ ndò nọmba bụ 11.1 S65. -Atụ anya ịhụ anyị ochie na ndị ọhụrụ ahịa e!